Ny fitsipika - Make the Choice Madagascar : fandaharana atolotr'i Elamad
Le casting des leaders engagés.
Ny “Make The Choice Madagascar” dia fitaovana iray, manerana ny Firenena Malagasy; entina hampiroboroboana ny fandraharahana eo amin’ny tanora 18 taona no miakatra, tsy mifidy na manana diplaoma na tsia, fa kosa manana tetik’asa na hevitra hanangana orinasa na efa manana orinasa latsaky ny 3 taona.
Ny tanjon’ny “Make The Choice Madagascar” dia ny hanome fahafahana ireo tanora ireo hanatanteraka ny nofinofiny sy ho an’ireo mpandraharaha lehibe mba hizara ny traikefany ary ihany koa hampitombo ny toe-karenan’i Madagasikara.
Misokatra ho an’ny rehetra ny fandraisana anjara amin’ny “Make The Choice Madagascar”, ankoatra ireo:
– mpiasa, ny solontena sy tompon’andraikitra ao amin’ny mpikarakara sy ny mpiara-miasa aminy
Ireto kosa ny fepetra
– 18 taona no miakatra
– na manana mari-pahaizana na tsia
-monina eto Madagasikara
-manana tetik’asa na hevitra hanangana orinasa
– manana orinasa latsaky ny 3 taona
Ny fisoratana anarana sy fandraisana anjara
Izay maniry handray anjara amin’ny “Make The Choice Madagascar” dia mameno ny taratasy fisoratana anarana eto amin’ny tranon-kala sy mandefa ny horonan-tsary maharitra 90segondra.
Ny tetik’asa dia mety manana mpitarika iray sy mpiara-miasa maromaro. Tsy azo atao kosa ny mitondra tetik’asa an’olon-kafa sy mifaninana amin’ny alalan’ny solon-teny maromaro naamin’ny anaran’ny mpandray anjara hafa.
Ny fandraisana anjara dia voarindra amin’ny fomba voalaza ato amin’ity fitsapaka ity. Araka izany, ny fisoratana anarana tsy mifanaraka amin’ny fehezan-dalàna sy ny fepetra voaresaka ato amin’ity tahirin-kevitra ity dia tsy azo raisina.
Fahamarinan’ny fisoratana anarana
Ny fampahalalana omen’ny mpandray anjara dia porofon’ny maha izy azy ary tsy maintsy marina sy mahitsy. Ny tsy fanajana io lalàna io dia mety hitarika amin’ny fanilihina tsy ho isan’ny mpandray anjara amin’ny “Make The Choice Madagascar”.
Voarara amin’ny fandraisana anjara ihany koa ny tetik’asa:
-manimba ny fahamendrehan’ny olombelona
-momba ny firaisana ara-nofo, sary vetaveta, fitanjahana
-fampiroboroboana hetsika na fety politika
-momba ny fanavakavahana, fankahalana toetra na olona iray, na vondron’olona
Dingana 1 : Mandraisa anjara
Izay rehetra maniry ny handray anjara amin’ny «Make the Choice Madagascar», dia tsy maintsy mameno ny fisoratana anarana, manaiky ny fitsipika ary mandefa horonan-tsary 90segondra anehoany ny tetikasany na ny orinasany; ao amin’ny tranonkala, na amin’ny mailaka : makethechoicemada@gmail.com
Azo atao amin’ny fiteny gasy na frantsay ny horonan-tsary ary tsy maintys manan endrika iray amin’ireto : .avi, .mkv, .wmv, .mov, .mp4 sy .mpg. Tsy maintsy mitovy amin’ny fepetra horonan-tsary Youtube ny anao. Ary tsy tokony hisy mozika lafika izay tsy anananao zo avy amin’ny tompony, raha tsy izay dia ho fafan’ny Youtube ny horonan-tsarinao.
Ny Orange Madagascar dia manolotra ny toera-pivarotany : Analakely, ZOOM Ankorondrano, SMART TAnjombato, Ampasamadinika, BTK Moramanga, Antsirabe, Manakara, Tamatave, Diego, Majunga, Nosy-Be, Antoshihy, Fort-Dauphin, Fianarantsoa ary Toliara. Iznay dia ahafahanao manao ny hornonan-tsarinao raha tsy manana fitaovana hianao.
Ny fara-fisoratana anarana sy fara-fandefasana ny horonan-tsray dia hita ao amin’ny tranonkala.
Hisy tetikasa 100 ho fidian’ny ELAmad hiditra amin’ny Make the Choice Madagascar sy hanohy ny fandaharam-potoana rehetra. Handray anjar aamin’ny fandaharana fahita lavitra sy radio ihany koa izy ireo, anehoany ny tetikasany na ny orinasany ary ny faritra misy azy.
Dingana 2 : Fampianarana avo lenta
Ity dinagan ity dia anatanterahina ny rafitra voalohany amin’ny fandaharana, dia ny “Meet Up”, ny fampianarana avo lenta ary ny fanehoana tetikasa.
Andro 2 mandritra ny faran’ny herinandro ahafahan’ny mpandray anjara mifiyd izay ho mpanazatra azy. Ao anatin’nizany dia omen’ny mpikarakara mpanazatra iray avy ny mpandray anhara, izay hanaraka azy sy hitan-tsoroka azy mandritra ny fandaharana rehetra. Ny fanarahana voalohany dia tsy mbola ara-teknika akory, fa ara-olona. Izany hoe : fahatokisan-tena sy fahazotoana. Ny mpanazatra dia hanampy azy handroso sy hanatanterak ny tetikasany.
“Fampianarana avo lenta”
8 herinandro natokana ho ami’nizany. Atrikasa, fiofanana, fanazarana hiarahana amin’ny matihanina Make The Choice Mada. Hisy ihany koa ireo vahiny matihanina hafarana ho avy.
Mandritra izant dia hisy 2 herinandro hatokana amin’ny fianarana maneho tetikasa na “Pitch”
Mandritra izany fotoana rehetra izany dia hisy fandaharana 5 amin’ny fahitalavitra hanehoana iroe mpandray anjara 100.
“Fanahoana tetikasa na Picth”
Hisy vondrona hatokan’ny mpikarakara hitsara ireo kandidà 100 mandritra ny 3 andro. Izany dia mba ahafahan’iroe mpandray anjara maneho ny fandrosoan’ny tetikasany. Koa izany no ahafahan’ny vondrona mpitsara hanintsy sy hanoro izay fanarahana mety amin’ny kandidà tsirairay avy.
Ireo tetikasa 28 mandroso indrindra no ho voafidin’ny mpitsara sy ny olona mandritra ny fandaharana fahitalavitra sy handroso amin’ny dingana manaraka.
Dingana 3 : Fampianaraan avo lenta ho an’ny mpamarana
Ity dingana ity dia ahitana fandaharana “Grow Up Togerther” sy “Masterclass finaliste”, mandritra ny faran’ny herinandro.
“Grow Up Together”
Ny mpikarakara dia hanomana faran’ny herinandro « Grow Up Together » ho an’ireo 28 mpamarana izya voatazona nandritra ny dingana teo aloha. Izy ireo dia asaina handray anjara amin’ny atrikasa, … Ny tanjona dia hanampy azy ireo hanintsy ny heritsainy mba hanampiana azy hamelabelatra ny tetikasany.
Ireo mpandray anjara dia hahazo trano fivantanana sy sakafo ilainy mandritra izany, hiantohan’ny mpikarakara, toraka iznay koa ny fandehanan’izy iroe makany amin’ilay toerana.
Ireo 28 tafiakatra amin’ny dingana famaranana dia haneho ny tetikasany mandritra ny herinandro 7. Hiaraka aminy hatrany iroe mpanazatra. Hisy hatrany ny atrikasa, fiofanana sy fanazarana miaraka amin’ireo matihanina Make The Choice Mada sy ireo vahiny nafarana.
Mandritra izany dia hisy herinandro 2 hatokana ho amin’ny “business plan” sy herinandro 5 hanandramana ny tetikasa.
Mandritra izany fotoana izany dia hisy fandaharana 7 amin’ny fahitalavitra hanehoana ireo 28 tafiakatra. Afaka mifidy ny olona.
Dingana 4 : Ny famaranana
Ny famaranana ny “Make The Choice Madagascar” dia hiseho amin’ny fandaharana fahitalavitra anehoana ireo 5 mpandresy. Homena amin’io fotoana io ny fanomezana ho azy ireo.
FANARAHANA IREO MPANDRAY ANJARA
Ny tanjon’ny Make the Choice Madagascar dia ny hanolotra ho an’ireo voafidy, fanarahana manokana sy matihanina isaky ny fandaharana rehetra. Izy ireo dia tsy maintsy manatrika ny fotoana rehetra mandritra izany (fihaonana amin’ny mpanazatra, atrikasa, fiofanana, sns, …). Ny tsy fanatrehana izany dia mitondra ho amin’ny faniliana tsy handray anjara intsony amin’ny Make the Choice Madagascar.
Ireo 100 voafidy dia ho atrehan’ny mpanazatra, tompon’oriansa izay hampita amin’izy ireo ny fahalalany sy ny traikefany.
Izany dia atao mandritra ny 2 ora isan-kerinandro, mivantana na tsia mba hisian’ny fanarahana ara-dalàna ilay mpandray anjara. Ireo mpanazatra dia omena ny mpandray anjara aorian’ny “Meet Up”. Raha tena misy antony manokana vao afaka tsy manaiky ny mpanazatra azy ny mpandray anjara ieay. Hisy ihany koa atrikasa sy fiofanana samihafa. Hisy ny tanjona apetraka isakin’ny fihaonana mba hampitovy ny traikefa voarain’ny tsirairay.
Ireo 28 voaray amin’ny dingana famaranana dia mbola harahin’ny mpanazatra hatrany. Hisy ihany koa ny atrikasa sy fiofanana manokana ho azy ireo.
Ireo 5 mpandresy dia hahazo tan-tsoroka miavaka.
Ny mpikarakara dia afaka manolotra fanarahana manokana sy fanampiny mandritra ny fandaharana raha toa ka ilaina izany. Izany dia afaka halamina araka ny filan’ny mpandray anjara.
Hisy fanomezana mitentina Ar 50.000.000 ayant hanampiana ireo mpandresy hanangana ny orinasana. Izany dia mety ho ara-materialy, fitaovana sy vola.
Izay fampahalalana manokana lazain’ny mpandray anjara dia hijanona ho tsiambaratelo ho an’ny mpikarakara sy ny mpanazatra
Hisoratra amin'ny famelan-kafatra